Global Voices teny Malagasy » Slovakia: Tsy Fanekena ny Fisian’i Kosovo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Desambra 2018 13:04 GMT 1	 · Mpanoratra Margarete Hurn Nandika (fr) i Norbert Bousigue, Sylvia Aimée
Sokajy: Kosovo, Serbia, Slovakia, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Foko sy Fiaviana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zon'olombelona
Tamin'ny 17 febroary 2008, nanambara ny fahaleovantenany i Kosovo . Hatreto, 43 tamin'ireo mpikambana miisa 192 ao amin'ny Firenena Mikambana no nanaiky  [teny anglisy] an'io fahaleovantena io, izay i Etazonia, i Kanadà, i Aostralia, ary ny ankamaroan'ireo fanjakana ao amin'ny Firaisambe Eoropeana. Ny Fanjakana tena mandà mafy an'io fahaleovantena io, eo ankilan'i Serbia, dia i Rosia.
Nambaran'ny governemanta Slovaky, efa ho volana maromaro izay, fa tsy ekeny ny fahaleovantenan'i Kosovo izy. Etsy andanin'izay, nampahafantarin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny fa tsy hanaiky velively antontan-taratasy avy any Kosovo ny governemanta Slovaky, anisan'izany ireo pasipaoro. Tahaka izay voalazan'ny blaogera slovàky Peter Martinovic  [teny anglisy];
Raha toa misy teratany iray avy ao Kosovo tonga any amin'ny faritany Slovaky, dia heverina ho toy ny mpifindramonina tsy ara-dalàna izy na dia manana fahazoandàlana Schengen  manankery aza.
Iray amin'ireo tsy fahita firy izay mampitambatra ny tontolo politika Slovaky io olana io. Ankoatra ny Antokon'ny Fampiraisana Hongroà  [antoko misolo tena ireo Hongroà vitsy an'isa], niombon-kevitra avokoa tsy hanaiky ny fahaleovantenan'i Kosovo ireo antoko politika rehetra, na izy mpiandany amin'ny eoropeana fotsiny na tena mpisolelaka tanteraka amin'ny eoropeana. Tsy ny tantara nisamboaravoara nandritra ny taonjato faha-XXe fotsiny akory no fototr'io fanapahankevitra io, fa koa ny fahatsapàna manjavozavo ny hevi-bahoaka Slovàky hoe loza mitatao ho an'ny firenena ireo Hongroà vitsy an'isa monina ao atsimo [-n'i Slovakia] sady manao tetika ny handao azy sy hanjohy an'i Hongria.
Ny faritanin'i Slovakia ankehitriny dia anisany tafiditra tao anatin'ny Fanjakàn'i Hongria  taloha. Fony teo ambany ziogan'i Hongria, nitaky ny zony hisitrakana ny teniny ary koa ny fahaleovantenany ireo slovàky. Tamin'ny fiafaran'ny ady lehibe voalohany, nitarika toe-javatra mifanohitra ny fiforonan'i Tsekoslovakia , nahitàna hongroà vitsy an'isa nanorim-ponenana tao amin'io fanjakana vaovao io. Amin'izao fotoana izao, maneho ny iray ampahafolon'ireo mponina ao Slovakia io ampahany vitsy an'isa io, saingy any amin'ireo faritra sasantsasany atsimon'ny firenena, ny 40% n'ny mponina dia Magyars avokoa.
Slovàky iray 24 taona, Jan , maneho fijery hafa eo amin'ny blaogy Us Europeans (Isika Eoropeana):
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/14/131495/
 Peter Martinovic: http://petermartinovic.blogspot.com/2008/07/kosovo-question.html
 Slovakia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Slovaquie
 Antokon'ny Fampiraisana Hongroà: http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_de_la_coalition_hongroise
 Fanjakàn'i Hongria: http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Hongrie